Daad soo bixiddu waxay muujineysaa naqshadda AirPods 3 iyo sanduuqa ay ku shubaneyso | Waxaan ka socdaa mac
Waxay umuuqataa taasi jiilka saddexaad ee AirPods ku wareegsan. Xanta ugu dambeysa ee xaday waxay muujineysaa sawirka Apple AirPods cusub kiiskan sawirka wuxuu soo jeedinayaa inay wax ku darayaan suufkuna wuxuu lagama maarmaan u noqon doonaa in la isticmaalo.
Tani waxay ka mid ahayd dhibaatadii ay dadka isticmaala haysteen in kasta oo ay run tahay in aan la kulanno daadasho aan dhammaad ku noqon karin xaqiiqda, waxa aan ku aragno sawirka kore ayaa si cad u muujinaya naqshadeynta samaacadaha dhagaha ee Apple oo ay weheliso sanduuqa xamuulka.
AirPods-ka cusub ee 3 wuxuu la mid noqon doonaa AirPods Pro
Naqshadeynta ayaa ficil ahaan isku mid ah haddii aan fiiro gaar ah u yeelano qabashada laga helay bogga Aasiya 52 Audio. Xanta ku saabsan nashqadeynta samaacadaha sameecadaha ayaa ah wax aan aragnay isbuucyo warbaahin iyo falanqeeyayaal badan ayaa ka digaya isku ekaanshaha Apple AirPods Pro dhanka naqshadeynta. Kala duwanaanshaha kaliya ee gudaha ayaa noqon lahaa baabi'inta dhawaaqa firfircoon ee baajinta iyo suurtagalnimada in wireless laga soo rido sanduuqa, kaas oo ku dari lahaa deked hillaac ah.
Waxaas oo dhami waa kutiri kuteen iyo sidoo kale sicirka la hagaajiyay ee la tilmaamay in AirPodskan cusub ee 3 ay yeelan karaan. Waxaa la sheegay inay ku imaan doonaan qiimo ku dhow 200 euro laakiin waxaas oo dhan waa in si deggan loo qaadaa maadaama aysan jirin xog gaar ah oo rasmi ah. Xaqiiqdii bisha Maarso ee soo socota runtii waxaan ka bixi doonnaa shaki markii ay Apple bilaabeyso iyaga. Waqtigan xaadirka ah waa waqtigii la sii wadi lahaa aragtida xanta iyo naqshadaha suurtagalka ah in kastoo tan la mid ah ama u dhiganta AirPods Pro ay tahay tan leh xulashooyinka ugu dhabta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Daad bax ayaa muujinaya qaabka AirPods 3 iyo sanduuqa lacagtiisa
Apple Asalka Apple TV-ga cusub ee fiidiyowga ah si loo muujiyo taxanahaaga, filimadaada iyo dukumintiyadaada